DHAGEYSO: Maxaa laga filankaraa Shirka Madaxda maamul goboleedyadda? - Radio Risaala: Somali News Online
Home FAALLOOYINKA DHAGEYSO: Maxaa laga filankaraa Shirka Madaxda maamul goboleedyadda?
DHAGEYSO: Maxaa laga filankaraa Shirka Madaxda maamul goboleedyadda?
Sida uu qorshaha yahay Berri waxaa magaalada Kismaayo ka furmaya shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada, kaasi oo ah mid xasaasi ah.
Madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed,Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ku wada sugan magaalada Kismaayo, kadib markii shalay uu halkaasi ku soo dhaweeyay Madaxweynaha martida loo yahay ee Jubbaland.
Haddaba Maxaa laga filankaraa Shirkaan in ay kasoo baxaan Warbixintaan waxaa noo diyaariyay Wariye Maxamed Ciise Maxamuud.
Previous articleDHAGEYSO: Shirka Madaxda M/goboleedyada oo maanta baaqday
Next articleSomaliland oo xukuntay Ajaanib